CALAAMADAHA, HANTIDA FAA'IIDADA LEH IYO WAXYEELAYNTA NOOCYADA KALA DUWAN EE MALAB - BEEKEEPING
Waxaan ka ogaan karnaa carruurnimada in malabku yahay mid dhadhan fiican leh oo caafimaad leh.
Maanta suuqa ayaa na siinaya tiro badan oo kala duwan oo ah malab.
Nasiib darro, nasiib darro, waxay soo baxaan iyo been-abuurka.
Si aad u sameyso iibsashada tayada iyo in aanad waxyeeleynin caafimaadkaaga, waxaa muhiim ah inaad ogaato nooca malab ee ay tahay iyo waxyaabaha ay leedahay.
Kala duwanaanta noocyada kala duwan ee malab
Malabka bisil waa badeeco macaan, oo qaro weyn oo ay soo saaraan shinni. Sifooyinka kala duwan ayaa kuu oggolaanaya inaad doorato noocyo badan oo malab ah.
Qeybinta waxaa lagu sameeyaa shuruudaha soo socda:
asal ahaan botanis;
midabka iyo daahfurnaanta;
dhadhamiso oo uriso.
Marka laga yimaado asal ahaan botanical, malab waa ubax (dabiiciga) iyo honeydew.
Malabka ubaxa Bees waxaa laga soo saaro nectar ee ubax iyo dhirta dibadda-ubax.
Honeydew Honey Waxaa laga soo saaraa dhoobada malabka (cabitaanka dhadhanka ah ee afkoda iyo caleemaha dhirta) iyo hindhis (dareere macaan oo qarsoodi ah cayayaanka oo ku quudiya dheecaanka dhirta).
Tusaalaha caadiga ah ee kala-soocida ee malabka sida waafaqsan joqraafiga waa magaca "malabta Carpathian".
Sida laga soo xigtay qaabka helitaanka malabku wuxuu noqon karaa malab (oo ah qaabka dabiiciga ah) iyo ciddida (bamgareynta).
Marka laga eego dhumuc (ama joogteyn), malabku wuxuu noqon karaa dareeraha oo lagu beeray (crystallized).
Midabka malabku waa iftiin iyo mugdi, sida waafaqsan dabeecadahan, waxaad si qoto dheer u go'aamin kartaa naatarka la ururiyey: malab fudud waxaa laga helaa lime, acacia, gabbaldayaha, madow - laga bilaabo buckwheat iyo chestnut.
Hufnaanshaha malabku wuxuu go'aamiyaa joogitaanka manka iyo habka loo yaqaan crystallization. Malabka dabiiciga ah wuu ka duwan yahay waxyaabo kala duwan leh: oo leh dabeecad dabeecad leh, qadhaadh ama xiritaan. Carafka Honey waxaa lagu go'aamiyaa dhirta malab.
Honey ka soo ururiyey hal warshad ka soo baxa ur ah cad urta, caraf kala duwan waxaa laga helay farabadan oo dhan dhirta. Dhammaan noocyada malabku waxay leeyihiin sifooyin isku mid ah. Honey wuxuu leeyahay boog-bogsiiye, fal-celin, tallaabo qallafsan, ayaa saameyn togan ku leh wadnaha, wadnaha, dheef-shiid kiimikaadka.
Ma taqaanaa? Sannadka 2015, Ukraine waxay noqotay xulkii ugu horreeyay ee Yurub ah iyo kan saddexaad ee caalamka ee tirada malab soo baxday.
Honeycomb Honey - Qalab aad u qiimo badan oo miiskeena ku jira baakadihiisa dabiiciga ah - shanlada, adoo maraya xiriirka qalabka farsamada. Macaamiisha ugu baahida badan, unuggu waa dammaanad tayo leh oo ka ilaalinaysa been-abuurka. Intaa waxaa dheer, haddii unugyada unugyada la daboolay dabeecada dabiiciga ah (taangiyada), waxay ka dhigan tahay in malabku gebi ahaanba bislaaday. Shanaad Honey waa mid si fiican loo ilaaliyo oo aan qallajin mudo dheer. Malabka Honeycomb waa wax badan oo udgoon, iyo waxaa loo isticmaali karaa wadajir ah malab.
Ka timaadda wax, jidhku wuxuu helayaa walxo nafaqo leh oo nafaqo leh, fitamiino iyo antibiyootig dabiici ah. Asalka dufanka iyo propolis wuxuu kordhiyaa difaaca jidhka wuxuuna ka hortagi karaa horumarinta atherosclerosis.
Propolis waxay leedahay bactericidal, anti-sunta, fayruska, fungicidal iyo saameynta anti-bararka. Flavonoids, oo ay ku jiraan propolis, kor u qaadista saameynta fitamiin C iyo yareynta suurtogalnimada qaabka isdhexgalka.
Caanuhu waxay nadiifinayaan cirridka iyo ilkaha oo ka yimaada huurada, iyo propolis ku jira waxay burburisaa bakteeriyada cudurada. In xubnaha jirka nidaamka dheefshiidka, wax falaa sida nadiifiyaha dabiiciga ah.
Faa'iidooyinka isticmaalka maalin kasta ee malabku waa wax aan la fahmi karin: waxay ka caawinaysaa jirka inay ka ilaaliso hargab, la qabsashada cadaadiska iyo soo kabashada haddii ay dhacdo shaqo adag.
Ma taqaanaa? Propolis waa shinni shinbir leh oo qashin ah oo shinni ah oo abuuri kara adoo ururinaya walxaha cirridka ah ee ka soo baxa geedaha dhirta iyaga oo wax ka beddelaya enzymes gaar ah. Iyadoo ay, shinni daboolaan farqiga, jeermiska unugyada, waxay xakameysaa habsami u socodka gudaha.
Honey laga bilaabo hal warshad ayaa lagu magacaabaa monofloric. Malabta noocan ah ee foomka saafiga ah ayaa ku soo baxa aad u dhif ah, marar dhirta gaar ah waxay ku guuleysataa 40-60 boqolkiiba.
Cadaan cad acacia hufan ee foomka dareeraha ah iyo cad - barafaysan. Laga soo bilaabo acacia huruud ah waxay soo baxdaa iftiin, malab badan oo hufan dareere ah. Malabaha acacia macaan wuxuu leeyahay dhadhan jilicsan iyo qadhaadh ma aha mid ujeeddo u ah, iyo sababta oo ah content sare ee fructose ah, waxay noqon kartaa in dareeraha ah muddo dheer (1-2 sano). Malabka Acacia si fudud ayaa loo nuugo jirka wuxuuna beddeli karaa sonkorta iyo macmacaanka. Badeecadu waa qayb muhiim ah ee nafaqada macaanka, sababta oo ah processing aysan u baahnayn insulin. Taas macnaheedu ma aha in uu xasaasiyad xun u leeyahay oo saameyn wanaagsan ku yeeshay dheefshiidka carruurta.
Iyada oo hypertension, malab this ka caawisaa dhimista cadaadiska dhiigga, saameyn togan ku habka nidaamka wadnaha.
Noocyada Antiseptic ee malab ah acacia yihiin faa'iido leh cudurada indhaha: Xalka malab ee biyo-dami ah ayaa indhaha ku darsamaya; kareemka waxaa loo isticmaalaa dhuun-xannuun.
Cabbitaannada iyo xalalka malab waxaa loo isticmaalaa daaweynta dermatitis, boogaha iyo boogaha. Daawo dhaqameed waxay ku talinaysaa in ay si fudud u codsato malabta maqaarka cudurka qaba.
In malax-macmacaan warshadaha warshadaynta ah waxaa loo isticmaalaa diyaarinta kiriimka. Guriga ayaad sameyn kartaa maaskaro madow. Maqaarka caadiga ah ee qallalan, malab waxaa lagu qasi karaa saliid saytuun ah, maqaarka saliida leh - ukunta cad. Ka dib 20 daqiiqo, maaskarada waxaa lagu dhaqaa biyo kulul. Ku dhaqista biyaha iyo malabku waxay caawiyaan maqaarka si ay ula qabsadaan cilladaha yar yar iyo hagaajinta nafaqada.
Waa muhiim! Malabe la shiilay ayaa ah hab kale oo wanaagsan oo lagu xoqo maqaarka maqaarka.
Malab karis ah
Malab bataashu waa sahlan tahay in la aqoonsado. Muraayadahoodu waa madow (orange, terracotta, brown), iyo dhadhanka waa bahal yar oo cayilan, mararka qaarkood xitaa qadhaadh, kaas oo aan leeyahay cune xanuun. Malab adoo karaya ayaa si deg deg ah u dhalaalaya. Malab karis ah sababtoo ah joogitaanka fitamiino badani waxay leedahay saameyn tonic ah jirka. Waa faa'iido leh xilliga firfircoonida kordhinta ee hargabka, maadaama ay ka caawiso kor u qaadista difaaca iyo hagaajinta difaaca jirka.
Malabka Bacaha wuxuu ka caawiyaa sidii uu ula qabsan lahaa dhaawaca unugyada: wuxuu yareynayaa barar, kor u qaadista bogsashada nabarrada. Si loo soo celiyo xajiinta caloosha ee cudurka ulcer, waxaa lagu talinayaa in la cabo galaas biyo la kariyey oo calool madhan maalin kasta oo qaado cunnadda macmacaanka ee malab ka dib 15 daqiiqo.
Iyada oo isticmaalka malab bakeeriga diyaariyo fitamiinada dheeraadka ah.
Si aad u kaydiso malab, waxaa lagugula talin karaa inaad dooratid galaas adag, dhoobada, weel aluminium ama maacuunta birta leh. Weelasha caagga ah waa inaysan lahayn urin gaar ah.
Waa muhiim! Isku dar ah malab iyo cabitaan dabocase waa daaweyn qufac aad u fiican.
Midab khafiif ah oo madow iyo qadhaadh dhadhanka ayaa ah calaamado muhiim ah oo malab cows ah. Badanaa malabku waa qaali. Malab iftiin malab ah waxaa laga helaa tufaaxa foornada, iyo malab mugdi ah oo ka soo baxa farac. Nadaafada gaarka ah ee aan qofku jecelahay, badanaa waxay door bidaan noocyo badan oo malab ah, laakiin xiriiriyayaasha ayaa dhab ahaantii ka farxin doona nacfiska foosha iyo dhadhanka tartanka. Sida noocyada kale ee malab, malab cesto ah ayaa leh sifooyin badan oo bogsiinaya.
Waxaa lagu talinayaa in la cuno hargab, cabsida, kacsanaanta nerwada. Malabka Chestnut waa antibiyooti dabiici ah oo adag, waxay ka caawin doontaa inay la dagaallamaan geedi socodka bararka, xoojinta xididdada dhiigga, yaraynta cadaadiska, kordhiya rabitaanka cuntada. Waxay leedahay saameynta choleretic, kicinaysaa dheefshiidka, tones jirka.
Malabka kelyaha waa in la cunaa oo la cunaa daryeel carruurta iyo dadka u nugul xasaasiyad.
Waa muhiim! Mararka qaar iibiyeyaasha aan daacad ahayn waxay isku dayaan in ay galaan midab madow oo malab cows ah, oo lagu daro sonkorta gubanaysa. Malabka noocaan oo kale ah wuxuu leeyahay habka ugu dambeeya.
Malab Linden waa mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee malab. Hafafka cad, cagaarka cagaarka leh ama roodhida cagaaran (sababtoo ah garaacista caarada), urta malabku waxay u egyihiin carafka ubaxyada lime - macaan iyo udgoon leh oo leh tilmaamo ka mid ah cagaarka iyo camphor. Dhadhanka malabku waa mid aad u fiican, oo leh dabacsanaan joogto ah iyo qadhaadh macquul ah. Malabka midabka leh wuxuu leeyahay midab jaalle ah oo qurux badan iyo qaab dhismeed aan bisil ahayn. Waxaa la naqshadeeyey 3-4 bilood ka dib bamgareynta, si tartiib tartiib ah u lumiya daahfurnaankeedii iyo helitaanka dhar qaro weyn.
Malabka Linden waxaa lagula talinayaa isticmaalka marka qabowgu bilaabmayo sida sudorific. Isticmaalka dibedda ayaa ka caawin doonta xallinta dhibaatooyinka maqaarka: gubashada, cambaareynta, finanka daahirsan.
Sidoo kale noocan ah malab wuxuu faa'iido u leeyahay beerka iyo xubnaha unugyada dheef-shiidka (waxay leedahay saameyn yar oo calool-ridid ​​ah), waxay dib u soo celisaa awood, xoojisaa xaaladda guud ee jirka.
Maalinta ugu wanaagsan ee qaadashada malab lime - 2 qaado oo loogu talagalay dadka waaweyn iyo 2 qaado oo loogu talagalay carruurta.
Ma taqaanaa? Laga soo bilaabo ubaxyadii mid ka mid ah linden dhexdhexaad ah, xaaladaha ugu wanaagsan, shinni soo saari karo in ka badan 16 kg oo malab ah.
Bees ururiyaan nectar ka ubaxa beerta ama raspberry kaynta ee bilaha ugu horeeya ee xagaaga. Dhismaha ubaxa waxay u oggolaaneysaa inay sidan sameeyaan xitaa cimilada roobka. Raspberry Forest waa dhirta ugu badan ee wax soo saarka: laga bilaabo hal hektar ah, bees waxay soo ururiyaan 70-100 kg oo malab, iyo beer beer mid, 50 kg. Malabyo raspberry cusub waxay leeyihiin hoon dahab ah, dhadhan raspberry qurux badan, qaab jilicsan iyo dhadhan jilicsan iyada oo qadhaadh. In geedi socodka crystallization, malab raspberry wuxuu noqonayaa grainy iyo noqdaan creamy.
Noocan ah malab waa wakiil immunomodulatory cajiib ah iyo gargaar xoog leh ee daaweynta hargabka iyo cudurrada neefsashada. Daawo dhaqameedku wuxuu soo bandhigaa isticmaalka malab-raaca shaaha diirran ama caano.
Si aad u neefsatid biyo yar-yar yar hal galaas oo biyo kulul ah kuna dar malqacad malab ah, waxaad u baahan tahay inaad u neefsatid labada lammaan ilaa nus saac. Nidaamkan waxaa la samayn karaa 10 maalmood.
Waa waxtar leh in la cuno malab raspberry ee joogitaanka nabarrada iyo stomatitis ee afka, daal joogta ah iyo neurosis. Waxay ka caawineysaa jirkaaga inuu ku nasto oo uu dhiso hurdada. Waqtiyadii hore, hantida malab si ay u baabi'iso caabuqa waxaa loo adeegsaday haweenka daaweynta cudurradooda (boogaha, boorka).
Waa muhiim! Si loo kala saaro dhabta malab been abuur ah, waxaa muhiim ah in la ogaado xeerar yar. Malabka dhabta ah ee baaluqa ah waa mid muuqda, ma jiidi karo qaaddo sida jelly. Xilliga jiilaalka, malabku ma noqon karo dareere. Haddii aad ku shubto malab wanaagsan oo ku jirta galaas biyo ah, ma jiro wax deg deg ah. Haddii aad hoos u dhigto dhibco yar oo iodine ah oo malab ah oo midab buluug ah, waxaa loola jeedaa in malabku ku yaraato istaarijka.
Malabka gabbaldayaha waa sahlan tahay in wax laga barto: wuxuu dhalaalayaa huruud, macaan iyo wax yar oo tartiib ah oo ah wareegyada hore. Malabkan ayaa si dhaqso ah u dhalaalaya, qolofka cadaa badanaa wuxuu ku daboolaa dusha, kadibna 2-3 toddobaad oo malab ah dareeruhu wuxuu isu beddelaa tiro badan oo leh dhoobo waaweyn. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in 50% ee mass ee malabku yahay glucose. Malax adag leh, oo leh jaale ama huruud ah, waxay u egtahay subagga dhalaalay.
Malab gabbaldaysto ah waxaa ku jira qayb weyn oo ah astaamaha ammaahda ee muhiimka ah ee loogu talagalay borotiinka synthesis, iyo antioxidants.
Sababtoo ah muuqaal aan aad u soo jiidasho leh, iibsadayaashu badiyaa waxay dhaafaan nooca noocyada malab. Dhab ahaantii, waxay leedahay sifooyin badan oo bogsoon leh. Malabka gabbalaha waa antidepressant dabiiciga ah, waxay kaloo xoojisaa derbiyada xididdada dhiigga, waxay yareysaa bararka, waxay hagaajisaa shaqada beerka. Waxyaabaha sonkorta leh ee sarreeya waxay gacan ka geystaan ​​shaqada ritmoon ee wadnaha.
Isku-darka malab-gabbalaha iyo qorfe ayaa waxtar u leh kahortagga arthritis-ka.
Waa muhiim! Marka kululeynayo ka badan 50 ° C, malabku wuu lumiyaa hantida qiimaha leh.
Malabaha kufsiga waa mid caan ku ah Europe iyo America, waxaan leenahay canola badi ahaan loo tixgeliyo sida dalagga quudinta xoolaha. Geedka waxaa ku jira saliidaha lagama maarmaanka u ah oo siinaya malab ah caraf udgoon. Iyadoo 1 ha of beeraha kufsi leh waxaad heli kartaa ilaa 90 kg oo malab ah. Malabka kufsiga waxaa lagu gartaa midabka huruudka ah (midab cad ka dib qalabixinta) iyo ur ah mid xoog leh. Malabkani wuxuu dhadhamiyaa mid aad u macaan, xitaa in yar oo sonkor ah, maadaama uu ku jiro qadar badan oo ah gulukoos iyo fructose, oo ka baxaya xitaa qadhaadh. Waa ficil ahaan loola dhaqmo biyo, waxaa fiican in aan ku darin cabitaanka.
Joogista malab kufsigu waa mid qaro weyn. Honey ayaa si dhaqso ah u dhalaalaya in la kariyo maalin kadib marka la goosto, oo aan la bamgareyn karin. Sidaa darteed, malab kufsi badanaa wuxuu ku dhacaa shinni xoqan.
Hoyga, malab kufsi ayaa lagu keydin karaa dawan dareere ah illaa 3 asbuuc, sidaas daraadeed waa ka wanaagsan inaad ku iibsato weel yar oo aad isla markiiba isticmaasho. Wareeg malab ah ayaa lagu kaydiyaa meel qabow mugdi ah.
Malab kufsi ayaa faa'iido u leh anemia iyo cudurada habka wadnaha. Boron ku jira waxaa ku jira dib u soo celinta nudaha lafaha iyo shaqeynta qanjirka thyroid. Honey wuxuu jidhka ku quudiyaa tamar, taas oo muhiim u ah ficil jirka culus. Malabta kufsigu waxay wax ku ool u tahay la tacaalista qufaca waxayna si fiican u yareyneysaa cunaha xanuunka.
Waa muhiim! Marmarka qaarkood malab waxay keeni karaan neef. Contraindication in isticmaalka malab waa idiosyncrasy. Cudurka sokorowga ee leh nooca labaad ee cudurka ayaa ka wanaagsan inuu kala xaajo arrintan dhakhtarkaaga. Laguma talinayo in la cuno malab caruurta 3 sano ka yar.
Malabka ubaxa Polyflory
Malab dabacsan laga soo saaro nectar oo ah malaayib kala duwan. Honey badanaa wuxuu ka helaa magacyada dhulka laga soo ururiyey: kaynta, steppe, meadow, buur.
May malab - malab ugu horeeya, bamgareyn jiray badhtamaha May - horraantii Juun. Malabkani wuxuu leeyahay midabyo cad (laga bilaabo cadaan ilaa huruud) iyo dhadhan macaan oo aan qadhaadh lahayn. Isla markiiba bamgaraynta, waxay u egtahay mid macaan, sharaxaad la'aan ah, sharoobada iftiinka, waxay u egtahay muuqaalka ugu dambeeya marka ay qaadato qiyaastii 3 ilaa 5 bilood. Ariga malab ee May waa bouquet gaar ah oo ur ah dhirta kala duwan ee melliferous dhirta ee Bloom ee guga: ubaxa dooxada, cherry shimbir, currant, strawberry, cowberry, cherry, tufaax, khudradda, sage, sariir.
Mal malaha waa kuwa ugu caansan oo dalbaday, waxay leedahay hanti daweyn oo badan, sida noocyada kale ee malab.
Faa'iidada khaaska ah ee malab May ayaa ah in uu yahay alerjiyo yar-yar oo si badbaado leh loogu isticmaali karo cuntada ilmaha, iyo joogitaanka fructose ayaa u ogolaanaysa sonkorowga.
Waa muhiim! Haddii aad ka cabto hurdo la'aan, isku day in aad cabto galaas caano diirran ama biyo ah oo beed u ah malab intaadan sariirta aadin.
Malab ciid ah waxaa laga soo saaraa beedka ubaxa dhirta kaynta, geedaha iyo geedaha cagaarka ah (xayawaan, geedo, geedo, chokeberry, soodho, cherry shimbir, hawada, blueberry, strawberry, raspberry, marjoram, laanboolka dooxada, aadme). Malabkani wuxuu leeyahay dhadhan qadhaadh ah iyo dhadhan aad u qadhaadh oo dhir ah. Midabka malab kaynta wuxuu ku xidhan yahay dhirta u adeegay dhirta malab: waxay kala duwan tahay iftiinka ilaa mugdi madow. Iyada oo kaydinta muddada dheer, malabku wuxuu hirgeliyaa qaabdhismeed heterogeneous leh kareemo yaryar, marka hore waxay yeelan kartaa labadaba dareeraha iyo adkeyn qaro leh. Beehives for apiary kalluunka waxaa la dhigaa glades iyo geesaha kaynta.
Malabta beerta waa badeeco aad u bogsiiya, taas oo isu keenta sifooyinka wanaagsan ee dhirta badan. Marka la eego tirada guryaha daweynta iyo nafaqada malab kalluunka waa hogaamiyaha dhammaan noocyada malab.
Waxaa ku jira xaddi badan oo fiitamiin ah (A, B1, B2, B6, C, PP, K, E) iyo macdanta, waxay saameyn ku yeeshaan ku dhowaad dhammaan nidaamyada unugyada, waxay leeyihiin jeermisyo, anti-bararka iyo saameynta murqaha.
Malab ciid ayaa ka caawiya inuu kordhiyo heerarka hemoglobin, tones jidhka waxaana lagu taliyaa hurdo la'aan. Waa waxtar u leh ka-hortagga iyo daaweynta hargabka: inta lagu jiro muddada khatarta kordheysa, nafaqada fiitamiinada leh ee fiicani waxay noqon doontaa isku darka miraha la qalajiyey iyo lowska leh malab.
Ha iloobin in malab kalluunku yahay kaloori-sarre, badanaaba wuxuu keenaa fal-celinta xasaasiyadda ee carruurta.
Ma taqaanaa? Bortnichestvo - hab qadiimiga ah ee kaydsiga shinnida, oo ku salaysan isticmaalka boodhka - dabiici ah ama hollowed godan geedaha si loo ilaaliyo shinni. Iyadoo horumarinta kaydinta dhaqanka iyo faafinta qaabka qaabdhismeedka ayaa lumay qiimihii oo marar dhif ah loo adeegsaday, laakiin dhulka Ukraine waxaa weli laga helaa kaymaha Polesye.
Noocan ah malab waa mid caan ah. Waxay ku saleysan tahay nectar badan oo caleemo dhir ah oo badan: oregano, valerian, celandine, mustard, miro, boorsada adhijirada, garaaca, eeyga ubaxa, dhirta, alfalfa, ivan shaaha, løndelion, chamomile, miro, hilibka, johannesört wort, thistle, nightshade. Takhasuska iyo tayada daawooyinka, iyo sidoo kale muuqaalka malabta beerta, waxay ku xiran tahay baahida dhirta caan ku ah aagga xayawaanka. Laga soo bilaabo marxalado xilliyo kala duwan, malabku wuxuu u muuqan karaa mid kala duwan. Nidaamka midabka ee malabku waa mid ka soo jeeda jilicsan-jaale ah iyo midab khafiif ah, dhadhanka macaan leh qadhaadh, urta waa qurux, geedaha.
Haddii dhirta ugu weyn ay tahay duur joogta ah, malabka waxaa ku jira fitamiin badan. Sage iyo chamomile waxay bixiyaan malab leh guryaha ka hortagga bararka, xajmiga - xajmiga, durayo iyo bactericidal, qiimeeyn - sifeyn. Malabiyo Hypericum waxay wax ku ool u tahay daawaynta maqaarka maqaarka, boogaha, iyo nabarrada.
Степной мед вобрал в себя аромат и полезные свойства степного разнотравья, он характеризуется высокими питательными и целебными свойствами. Медоносами для такого меда являются культурные (гречиха, клевер, рапс, тимьян, донник) и дикорастущие (одуванчик, чертополох, василек, осот, дикая редька) растения. Honey wuxuu leeyahay khudrad dahabi ah iyo dahab ah, urta nacnacan iyo dhadhiif tartan tartiib tartiib ah, si deg deg ah u dhalaalaya.
Malabka Steppe ayaa faa'iido leh in la qaato cudurada beerka, xubnaha neefta iyo hargabka. Saamaynta macaanka ee malabta steppe waxay waxtar u leedahay xanuunka dareemayaasha, madax xanuun, culeyska, hurdo la'aan.
Honey waxay kaa caawineysaa in aad caadeysid cadaadiska dhiigga, kordhiya maraakiibta wadnaha. Waxaa lagu taliyey in lagu daaweeyo gastritis leh acidity sare Qaado muraayad caano diiran oo la kariyey saddex jeer maalintii dhowr saacadood ka hor cunto kahor qaado oo ah malab.
Ma taqaanaa? Laga soo bilaabo dhirta sida azalea, andromeda, aconite, qoryaha duurjoogta ah, maqaarka caadiga ah, heather caadi ah, laurel buur, rhododendron, hellebore, waxa loo yaqaan "malab sakhraan" waa la helay. Waxay keentaa calaamadaha suntan ama sumowga qof: yalaalugo, matag, dawakh iyo daciifnimo, neefsashada neefsashada iyo shaqada wadnaha, mararka qaarkood - miyir beelid.
Malab-buuri waa nooc caan ah oo qaali ah oo malab ah oo laga soo ururiyey goobo xayawaan ah oo ku yaala hareeraha xayawaanka ah (gudaha bannaanka, buuraha buuraha). In ka badan 50 dhirta waxay noqon karaan dhirta malab ee malab buur: acacia, hawtaarka, madoobaatada, cherry duurjoogta ah, eeyga oo kacsan, yamaarug, sage, elecampus, oregano, veronica, melissa, thyme, hawthorn. Malabta buuru waa malab dabacsan, sidaa darteed, aromasaha urka leh ee midabada badan ayaa la isku daraa, iyo duufaan iyo qadhaadh ayaa dareema dhadhan. Nooca malabku wuxuu ku xiran yahay gobolka oo la goostay. Midabka malab ee buurtu waa midabyo huruud ah oo jaalle ah iyo bunni ah.
Malabkan buurta ah waa daaweyn heer sare ah ee hargabka, cudurada mareenka neefta, indhaha, beerka, waa mid waxtar u leh nidaamka wadnaha iyo qanjidhada thyroid, wuxuu dejiyaa nidaamka dareemayaasha, wuxuu leeyahay dabeecad lid ku ah, sidaas darteed waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo nabarrada iyo gubashada.
Malab-buur waa immunomodulator awood leh. Waxaa sidoo kale lagu talinayaa sonkorowga.
Ma taqaanaa? Wakiilada Nepalese Gurung oo ah malayga duurjoogta ah ee dhererka 25 mitir ka sarreysa dhulka iyadoo la adeegsanaayo qalabka ugu fudud: jaranjarrada xargaha iyo ulaha bamboo dheer.
Malab khafiif ah
Marka cimilada kulul, marka dhirta ay joojiso soo saarida nectar, beesku waxay ururiyaan honeydew iyo suuf. Marka hore waa dareere macaan, kaas oo ka soo baxa caleemaha iyo caleemaha dhirta, iyo kan labaadna waa badeecada waxqabadka cayayaanka (aphids, caleemaha caleen, chertsev) kuwaas oo ku quudiya casiir khudradeed.
Fluidkan waxaa ku jira badeecooyinka wax lagu sumoobo borotiinka iyo walxaha kale ee xayawaanka.
Marka ilkuhu ay yihiin caleemaha dhirta cagaarka ah (firax, dhoobo, geed), malab waxaa loo yaqaan 'cufan'; Dayrta ayaa laga soo ururiyey dhirta qallafsan (lini, qulqulka, geedkii, sir, ash, cherry, tubta, tufaaxa, sawdh) waxay noqonaysaa aasaaska malab qafiif ah.
Bees waxay soo ururiyaan suufka dhulka hoostiisa iyo kaymaha ciriiriga ah. Badanaa Honeydew malab waxaa ku jira qaar ka mid ah malab ubax, noocan oo kale ah malab waxaa lagu magacaabaa isku dhafan. Honeydew malab maaha mid ku haboon beertu inay quudiso xilliga jiilaalka. Qaybo badan oo ka mid ah macdanta iyo xeryaha nitrogen ayaa keeni kara dhimashada qoyska shinni. Honeydew malab waxaa loo soo saaraa xagaaga qallalan ama goor dambe, marka badanaa dhirta ayaa cilladaysan. Waxay leedahay qaab muuqaal leh oo adag, midab madow ama orange-jaalle ah (malab ka soo cirbadaha) midabka iyo ka kooban macdano badan. Malabta noocan ah waxay leedahay dhadhan macaan oo leh qoraallo qadhaadh. Caraf malabka malabku waa mid qumman, basbaas. Biyaha, malabkan noocan ah ayaa si xun u kala diraa.
Malabe Honeydew waxay heshay codsiga korrelology-ka (daryeelka maqaarka dhibaatada leh), cunto karinta iyo daawada dhaqameed (cunto dheellitiran oo leh yaraanta macdanta, daaweynta hargab, cudurrada qalabka wadnaha, beerka iyo beeryarada).
Ma taqaanaa? Malabaha macaan ee malabku aad ayuu ugu faraxsan yahay galbeedka Yurub.
Qaar badan oo malab iyo hantidoodu waxay ku xiran tahay arrimo badan: tirada dhirta malab, meesha iyo xaaladaha koritaankooda, ururinta iyo kaydinta alaabta la dhammeeyey. Honey waa shey gaar ah, gaar ahaan malab laga sameeyey geedo yaryar. Adiga oo isticmaalaya malab sax ah iyo dhexdhexaad ah, waxaad noqon doontaa faa'iido weyn jirka.